China Yakagadziriswa Girazi Chikamu Kugadzira uye Fekitori | Saka Zvakanaka
With kukura girazi kubudiswa indasitiri uye kudzamiswa kwevanhu kunzwisisa zvakaisvonaka chokupika insulating girazi, kuti chikumbiro kukura insulating girazi iri kuramba kuwedzera. Pamusoro pechishandiswa chakakura mugirazi keteni pamadziro, mota, ndege uye zvimwe zvinhu, girazi rinovharidzira rapinda mudzimba dzevanhuwo zvavo.
Izvi zvinonyanya nekuti iko kushandiswa kweinodzivirira girazi kunogona kuvandudza kupisa kuputira uye kurira kwekudzivirira kweiko kwemasuo neWindows, kuitira kuti magonhi nemawindows zvigadzirwa zvisakwanise kungovanda kubva kumhepo nemvura, asi zvakare zvine simba rekuchengetedza simba, kudzikisa mutengo yekupisa munguva yechando uye kutonhora muzhizha. Panguva imwecheteyo, girazi rakasungirirwa rinoshandiswa zvakanyanya munzvimbo yefriji, kunyanya iyo inotonhora firiji / inotonhorera. Sechikamu chikuru chefriji / inotonhorera musuwo, kushandiswa kwegirazi rakagadziriswa kwakaderedza zvakanyanya simba rekushandisa uye chinhu chakasvibirira chakasvibirira.
Saka Fine furiza / inotonhorera girazi mikova uye yakakosha inopofumadza zvakapenya mahwindo nemagedhi ndizvo zvigadzirwa zvikuru zvevatengi vedu vepasirese. Saka isu tiri kupa yakadzivirirwa girazi panguva imwe chete.
Rondedzero yeSo Fine yakadzivirirwa girazi seinotevera.
1. Girazi mhando inosarudzika inosanganisira yakajairwa girazi rakajeka, yakaderera-E girazi, isina-kudziya & inopisa girazi.
2.Girazi chimiro chinogadziriswa: girazi rakapetwa & girazi rakakombama.
3. Girazi saizi inogadzirwa.
4. Panane regirazi rakagadziriswa, chikumbiro chakajairika chiri zviviri, zvitatu uye zvina.
Kugamuchirwa kuti utibate kuti uwane rumwe ruzivo kana kuita kubvunza.
Pashure: Extrusion PVC Mbiri uye Aluminium Alloy Mbiri
Zvadaro: Yakasarudzika inopofumadza kaviri glazing
China Kuvaka Girazi
China Kaviri Yakapetwa Venetian Girazi
Yakasungirirwa girazi yemahwindo nemikova
Insulated girazi dzakabatana